ChaCha + iPhone: Mata, Geography, Azịza, ringkekọrịta | Martech Zone
Monday, April 25, 2011 Saturday, October 29, 2011 Douglas Karr
Naanị m ibudatara wee nwee ike igwu egwu na ChaCha emelitere ngwa iPhone. Enwere m mmasị… njiri ike dị mfe ma njirimara ya siri ike. Ihe mbụ ChaCha iPhone ngwa ejiri gbanye azịza site na nchekwa data site na ngwa iPhone laghachi na onye ọrụ. Ngwa a bu ezigbo uzo - o nwere ihe ijuanya ole na ole.
Dị ka na ChaCha saịtị, ajuju ajuju ajuju gha abanye na ọdọ mmiri ndu a ndụ omume.
ChaCha echekwara mgbe niile ọdịdị ala ya na ajụjụ ya mana emebighi data ahụ. Na nchekwa data na-akpali ọtụtụ nde azịza otu ụbọchị, nke ahụ bụ ezigbo goldmine nke ozi. Dị ka Scott na-ekwu na vidiyo ya banyere ngwa ahụ - ọ mara mma na-eri ahụ iji hụ ajụjụ ndị ndị ọzọ na-ajụ gburugburu gị.
Ị nwere ike ugbu a tinye ihe ngosi! Nwere isiokwu nke mmasi? Nweta nsonaazụ a na-asọpụrụ gị. Eji m n'aka na nwa m nwanyị ga-enweta Justin Bieber Ajụjụ setịpụrụ n'egbughị oge.
Kekọrịta ajụjụ enwere ike site na email, SMS na Facebook!
Ajụjụ ndị metụtara ya dị mfe iji chọgharịa!
Ọ dị mma ịhụ ndị otu Scott ka ha na ndị isi na ụfọdụ echiche ọhụụ - ma na-etinye ngwongwo dị mma. Nyere Google Panda mbibi, usoro a na-eme ka aka gị na ndị egwu chaCha nwee obi ụtọ. Si a ahịa si ele ihe anya, I like that it both ume ọzọ nchọgharị (na Near Me atụmatụ) nakwa dị ka na-ewu na a na-azụlite atụmatụ iji mee ka ndị ọrụ laghachi (ya na mata).
Ekele ChaCha otu! Chọọ ma budata ngwa ọhụrụ ChaCha iPhone na iPhone gị. Echere m na e nwere ihe iPad version na-abịa - nke a bụ nnọọ jụụ!